Musa ukuyilahleka! I-Semalt inikeza ii-SEO Iimvavanyo kufuneka uzame lo nyaka
I-SEO yenye yeendlela eziqhelekileyo neziqinileyo okanye iindlela zokunyusa ukubonakala kwe-website yakho kwi-intanethi. Kukho izinto, amaqhinga, kunye neengcamango omele uzinakekele ngazo. Elinye igama elingachaza injini yosesho ukulungiselela "ukuzama." Kufuneka ukuba uzame amagama amancinci kwaye uzame ngamacebo amatsha kunye nezindlela zokuphumelela kwi-intanethi.
U-Jason Adler, uMphathi weMpumelelo weMthengi Semalt , uxoxile apha kwezinye ze-SEO imisebenzi omele uzame kulo nyaka.
Makhe ndikuxelele ukuba iimvavanyo zizo zonke iziseko zokuphuculwa kweenjini zokukhangela kunye nesigunyaziso sokuqhuba enye ithrafikhi kumaphepha akho ewebhu. Ngaphandle kovavanyo lwe-SEO, akunakwenzeka ukuba nabani na ukuba bavelise iinguqulelo kwiWebhu yehlabathi.
Uvavanyo 1: Ukuprintwa kokuqukethwe
Zonke iingcali ze-SEO ziyazi ukuba umxholo uyinkosi. Akungabazeki kuyo ngoba, ngaphandle kokuqukethwe komgangatho, indawo yakho ayikwazi ukuhlala kwi-intanethi. Ngelishwa, abantu abahlukahlukeneyo bakhetha ukutshintsha umxholo wokugcina ixesha kunye nemigudu yabo..Esi sicwangciso asiyi kukunika iziphumo ezifunwayo. Yingakho kufuneka udale umxholo womgangatho kwaye usebenzise iindidi zamagama abalulekileyo kumacandelo akho. Abantu abahlukahlukeneyo bakholelwa ukuba oku kuthetha ukudala amanqaku amaninzi imihla ngemihla. Enyanisweni, kuthethwa kuphela ukuba ubhala inqaku elinye imihla kwaye kufuneka libe yinto esemgangathweni. Ii-Arhente zisebenza kanzima ukufumana umxholo wazo obhaliweyo ngababhali abaphezulu kuzo zonke iindawo zehlabathi. Bahlawula ngokufanelekileyo kubalobi babo kwaye banikeze umsebenzi omningi. Akufanele nje ubhale amanqaku ekhwalithi kodwa ujonge ngamagama angundoqo kunye namagama ukuze ufumane iphepha lakho kwiikhompyutheni zenjini. I-Google ihlawula onke amaphepha ewebhusayithi esekelwe kumgangatho wekhontrakthi kunye negunya lakho le-domain jikelele. Ukuba udale iphepha elininzi, kubalulekile ukuba ufumane idilesi kunye neziqulatho ezibhalwe kakuhle okanye umxholo wewebhu.
Uvavanyo lwe-2: Uphuhliso lwamava lomsebenzisi
Amava omsebenzisi ahlala ebala nangona yintoni inxalenye yehlabathi ohlala kuyo. Khawuqwalasele njengesihluthulelo sokuphumelela kwaye unike iindwendwe zakho ithuba elihle. Ukudibanisa izicwangciso ezahlukeneyo kwi-SEO yakho njengesilingo esingapheliyo ukwenzela ukuba abantu abaninzi baninzi babonise umdla kumaphepha akho ewebhu. Akuyi kuphazamiseka ukutsho ukuba i-Google's algorithms kunye nezicwangciso zatshintshwe kwiinyanga ezidlulileyo. Ngoko, kufuneka uqonde ngakumbi ukuba iinjini zophando zifuna kunye nendlela yokuzisa amava abasebenzisi bakho kwiwebhsayithi. Xa uqonda ngakumbi iingqondo zezivakashi zakho, kungcono amathuba akho okuphucula nokubandakanya zombini iindwendwe kunye neenjini zokukhangela ngakumbi iGoogle.
Isivivinyo 3: Ukukhuthaza ukuHlanganisa kwangaphakathi
Uchwepheshe we-SEO uyazi ukubaluleka kokugxila kumaqhagamshelwano angaphandle naphakathi. Ukukhulisa iinqununu zakho zangaphakathi ngokubanzi kubalulekile. Ukugxilwa kwegama elingundoqo okanye i-anchor text engafanelekanga ayifuni nje ukufumana iziqhagamshelo eziya kumacandelo akho ahlukeneyo. Kunoko, kufuneka uthabathe izihloko ezahlukileyo kwaye uqinisekise ukuba umgangatho awukhatywanga naliphi na indleko. Hlanganisa onke amaphepha afanelekileyo kunye kunye nokufumana iziphumo ezilungileyo kwiiveki ezimbalwa.